AKHRISO: Yaa loo magacaabayaa Taliyeyaasha cusub ee Booliska & Nabadsugidda Soomaaliya [NISA]..? – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAAKHRISO: Yaa loo magacaabayaa Taliyeyaasha cusub ee Booliska & Nabadsugidda Soomaaliya [NISA]..?
AKHRISO: Yaa loo magacaabayaa Taliyeyaasha cusub ee Booliska & Nabadsugidda Soomaaliya [NISA]..?
Golaha Wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa goor dhoweyd shir uga bilowday magaalada Muqdisho.
Shirkan oo aan caadi ahayn ayaa looga hadlayaa arrimo muhiim ah oo ay ka mid yihiin ansixinta taliyeyaasha ciidamada Booliska iyo Nabadsugidda Soomaaliya oo uu soo magacaabay Madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo, kadib markii ay bannaanaadeen muddo ka badan 3 bilood iyo Bar.
Taliyaha NISA ayaa la sheegay in loo magacaabayo Cabdi Jiinow Calasow oo hore us oo noqday maareeyaha dekadda Muqdisho iyo Guddoomiyaha Gobolka Sh/Dhex, iyadoo ay isku dhaceen dowladii KMG ahayd ee Shariif Sheekh Axmed markii ay ka qaaday xilka maareeyaha Dekadda Muqdisho.
Taliyaha Booliska ayaa la sheegay in loo magacaabayo Jen. Axmed Taajir oo ka tirsanaa saraakiisha ciidamada Booliska oo taliye ku xigeen soo noqday xilligii dowladii C/llaahi Yuusuf.
Marka la eego xaaladdaha ku waregtay magacaabidda labadan xil, waxaa laga yaabaa isbedel yimaado daqiiqadaha ugu danbeeya iyadoo hore dhowr jeer dib loo dhigay magacaabiddan.
SAWIRRO: Madaxweynaha Jubbaland oo Furay Shir looga hadlaayo dagaalka Al-Shabaab
WARBIXIN: Dhaqaalihii NISA oo la xayiray, Ku-simihii Taliyaha oo Xabsi guri la geliyay & Kiis soo shaac baxay
40,959 total views, 1,712 views today
40,959 total views, 1,712 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
41,032 total views, 1,712 views today
41,032 total views, 1,712 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
41,044 total views, 1,712 views today
41,044 total views, 1,712 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
41,069 total views, 1,713 views today
41,069 total views, 1,713 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
41,097 total views, 1,710 views today
41,097 total views, 1,710 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]